Isiqu Kanye Nobuntu Bomuntu | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Eqinisweni, abaphoxekile, sebewubonile umsebenzi owenziwa iminyaka eyizi-6 000 kuze kube manje, ngoba angikaze ngibashiye. Kunalokho, ngenxa yokuthi okhokho babo badla isithelo emthini wolwazi lokuhle nokubi esasilethwe omubi, bangishiya ngenxa yesono. Okuhle kungokwami, kuyilapho okubi kungokomubi ongikhohlisayo ngenxa yesono. Angimgxeki umuntu, futhi angibaqothuli ngesihluku noma ngibasole ngonya, ngoba ekuqaleni ububi babungebona obesintu. Ngakho nakuba lawo ma-Israyeli angilengisa esiphambanweni obala, lowo obelinde uMesiya kanye noJehova futhi elangazelela uJesu uMsindisi, abakaze bakhohlwe isithembiso Sami. Lokhu kungenxa yokuthi angikaze ngibalahle. Ngemva kwakho konke, ngithathe igazi njengobufakazi besivumelwano engasimisa nomuntu. Leli qiniso seliphenduke yisivumelwano segazi esilotshwe ezinhliziyweni zabantu abancane nabangenacala, njengokungathi zibekwe uphawu, njengokuba khona kwamazulu nomhlaba kuze kube phakade. Angikaze ngikhohlise leyo miphefumulo enosizi engayihlenga, ngayizuza, futhi engiyithanda ukwedlula omubi ngemva kokuba ngiyikhethile. Ngakho, imagange ekubuyeni Kwami futhi ilinde ngokulangazela ukuhlangana Nami. Njengoba ngingakaze ngisule isivumelwano engasimisa nabo ngegazi, akumangazi ukuthi bebelokhu belinde ngokulangazela. Ngizophinde ngiqoqe lezi zimvu esezilahleke iminyaka eminingi, ngoba bengilokhu ngibathanda abantu; ukuthi nje izici zobubi zenezelwe ebuhleni obukubantu. Ngizozuza imiphefumulo empofu engiyithandayo nesengiyithandile, kodwa bengingabaletha kanjani ababi abangakaze bangithande futhi abaziphathe njengezitha Zami endlini Yami? Ngeke ngilethe inzalo kadeveli nenyoka engizondayo, engiphikisayo, emelana Nami, engihlaselayo, futhi engiqalekisayo embusweni Wami, nakuba ngenze isivumelwano ngegazi nomuntu. Kufanele wazi ukuthi kungani nokuthi lo msebenzi ngiwenzela bani? Ingabe kuhle noma kubi othandweni lwakho? Ingabe ngempela ungazi ngendlela uMose noDavide ababengazi ngayo? Ingabe empeleni ungikhonza njengoba kwenza u-Abrahama? Kuyiqiniso ukuthi upheleliswa Yimi, kodwa kufanele wazi ukuthi ubani oyommela nokuthi ubani oyoba nomphumela ofana nowakhe. Ekuphileni kwakho, unaso yini isivuno esijabulisayo nesanelisayo ekwazaneni kwakho nomsebenzi Wami? Ingabe siyanelisa futhi siyathela? Kufanele uzihlole. Ususebenze kanzima iminyaka eminingi ngenxa Yami, kodwa ingabe kukhona owake wakuthola? Ingabe kukhona owake wakushintsha noma wakuthola? Ngenxa yezinto ozibonile ebunzimeni, ingabe ufana noPetru owabethelwa, noma njengoPawulu owashaywa futhi wathola ukukhanya okukhulu? Kufanele uzinake lezi zinto. Angihlale ngikhuluma futhi ngicabanga ngokuphila kwakho okuncane kunohlamvu lwesinaphi, okulingana nohlwayi lwesihlabathi. Ukukhuluma iqiniso, yisintu engisiqondisayo. Nokho, angibheki ukuphila komuntu, engake ngamzonda kodwa ngamnaka kamuva, njengengxenye ebalulekile yokuqondisa Kwami. Kufanele kucace ukuthi ubuntu benu obudala babunjani, nokuthi niyizigqila zobani. Ngakho, ubuso babantu angibusebenzisi njengobukaSathane njengempahla eluhlaza ukuze ngikulawule, ngoba abantu abazona izinto ezibalulekile. Kufanele nikhumbule umbono Wami wasekuqaleni ngani, engakusho kini ngaleso sikhathi okwakuyinto ebaluleke kakhulu. Kufanele wazi ukuthi “izigqoko” ezisemakhanda enu azilahlekile unomphela. Ngicabanga ukuthi nonke niyazi ukuthi ekuqaleni naningebona abakaNkulunkulu, kodwa nathunjwa nguSathane kudala futhi nasebenza ekhaya lakhe njengezikhonzi eziqotho. Kade nangikhohlwa, ngoba senihlale isikhathi eside ngaphandle kwendlu Yami kodwa ezandleni zomubi. Labo engibasindisayo yilabo engasho kudala kusengaphambili futhi engibahlengile, kuyilapho niyimiphefumulo empofu ebekwe phakathi kwabantu ngaphandle komthetho. Kufanele nazi ukuthi anibona abendlu kaDavide noma kaJakobe, kodwa ningabekaMowabi, okungamalungu esinye isiZwe. Ngoba angisenzanga isivumelwano nani, kodwa ngenza kuphela umsebenzi futhi ngakhuluma phakathi kwenu, nganihola. Igazi Lami alichithekanga ngenxa yenu. Ngenza kuphela umsebenzi Wami phakathi kwenu ngenxa yobufakazi Bami. Ingabe awukaze ukwazi lokho? Ingabe ngempela umsebenzi Wami ufana noJesu owophela ukufa ngenxa yenu? Kwakungafanele ngibekezelele ukuhlazwa okunjalo ngenxa yenu. UNkulunkulu, ongenaso nesincane isono, weza ngqo endaweni enyanyeka kakhulu futhi enengayo, emhlabeni wezingulube nezinja owawungakulungele ukuthi kuhlale abantu kuwo, nokho ngiqhubekile ngabekezelela wonke la mahlazo ngenxa yenkazimulo kaBaba nobufakazi baphakade. Kufanele nikwazi ukuziphatha kwenu nokuthi anizona izingane ezizalelwe “emindenini ecebile nenamandla” kodwa niyinzalo ehluphekayo kaSathane. Anibona abasunguli phakathi kwabantu, futhi aninawo amalungelo abantu noma inkululeko. Kusukela ekuqaleni naningahlanganise lutho nanoma yisiphi ezibusisweni ezivela esintwini nasembusweni wezulu. Lokhu kungenxa yokuthi nisekugcineni kwesintu, futhi angikaze ngicabange ngekusasa lenu. Ngakho, nakuba kwakuyingxenye yecebo lami kusukela ekuqaleni ukuthi namuhla ngizoba nokholo lokukuphelelisa, kuwumsebenzi ongakaze wenzeke, ngenxa yokuthi izinga lenu liphansi kakhulu futhi kusukela ekuqaleni naningenasabelo esintwini. Akusona yini lokhu isibusiso kubantu?
Labo engibasindisayo bayimiphefumulo engiyikhulule esihlanzweni kudala, futhi bangabakhethiwe engabavakashela kudala, ngoba bebelangazelela ukuthi ngiphinde ngibonakale phakathi kwabo. Bangithandile, futhi baloba isivumelwano Sami engasenza ngegazi ezinhliziyweni zabo, ngoba ngabathanda. Bafana nezimvu ezilahlekile ebezilokhu zingifuna iminyaka eminingi, futhi balungile, ngakho ngingababiza ngama-Israyeli alungile nezingelosi ezincane ezinhle. Bengingeke ngihlazwe ngaleyo ndlela ukube bengiphakathi kwabo. Kungenxa yokuthi bangithanda ukwedlula indlela abathanda ngayo ukuphila kwabo, futhi ngiyabathanda njengoba lokho kuyinto enhle kunazo zonke. Kungenxa yokuthi badalwa Yimi futhi bangabami; abakaze bangikhohlwe. Uthando lwabo lwedlula uthando lwenu, futhi bangithanda ngokuzinikela okukhulu ukwedlula indlela enithanda ngayo izimpilo zenu. Bayazithoba Kimi njengoba kwenza amaphuphu amajuba esibhakabhakeni, nangokuzinikela okukhulu kunokwenu. Futhi kungenxa yokuthi bayinzalo kaJakobe, inzalo ka-Adamu, futhi baphakathi kwabakhethiweyo Bami, ngoba kade ngabathanda, ngaphezu kwendlela engibathanda ngayo, nangenxa yokuthi niyizihlubuki ezinkulu, ukuphikisa kwenu kuyithuna nakho, ningibukela phansi kakhulu, nibanda kakhulu Kimi, ningithanda kancane kakhulu, futhi ningizonda kakhulu. Niyawuzonda umsebenzi Wami futhi nizizonda kakhulu izenzo Zami. Ngokungafani nabo, anikaze nibheke izenzo Zami njengengcebo. Kunalokho nibanyanya ngamehlo abomvu ngenxa yezinkathazo, njengoSathane. Kuphi ukuzithoba kwenu? Sikuphi isiqu senu? Luphi uthando lwenu? Nilubonise nini uthando olukini? Niwabheke nini njengabalulekile amazwi Ami? Umusa bawube nalezo zingelosi ezithandekayo ezinozwela, ezingibungazayo futhi ezingilinda ngokulangazela, ngoba ngizithanda kakhulu. Nokho, engikubona namuhla yilelo zwe elingelona elabantu elingahlanganise lutho nabo. Anicabangi yini ukuthi onembeza benu sebendikindiki futhi sekuyisikhathi bengezwa lutho? Anicabangi yini ukuthi niwukungcola okungivimbayo ekubuyisaneni Kwami nezingelosi ezithandekayo? Kunini lapho zingakulindele khona ukubuya Kwami? Kunini lapho zake zangakulindela khona ukuphinde zihlangane Nami? Kunini lapho ezake zangakujabulela khona ukuba nezinsuku ezimnandi Nami futhi zidle kanye Nami? Niyabona yini ukuthi enikwenzayo namuhla—okuwukonakalisa umhlaba, ukubophelana amanqina enyathi, ukukhohlisana, ukwenza ngokukhohlisa, ngasese futhi ngokuhlazisayo, ningalazi iqiniso, nigetshengwa futhi nikhohlisa, nenza ubuqili, nizibheka njengabantu abahlale belungile futhi abangcono kunabanye, ninenkani, ninonya njengezilwane zasendle ezintabeni futhi ninokhahlo njengenkosi yezilwane ezinkulu zasendle—lokhu kuyafana yini nesidalwa esingumuntu? Niluhlaza futhi aninangqondo. Anikaze nilithathe izwi Lami njengegugu, kodwa esikhundleni salokho nibe nombono wokwedelela. Ngale ndlela, ngabe kuvelaphi okufeziwe, ukuphila kwangempela komuntu, kanye namathemba amahle? Ingabe imicabango yakho eyihaba iyokukhulula ngempela emlonyeni wengwenya? Ingabe iyokukhulula ngempela emlilweni ovuthayo? Ingabe ubuyowela kuleli zinga ukube umsebenzi wami ubuwubheka njengomcebo oyigugu? Kungenzeka yini ukuthi ngempela umphumela wakho awunakushintshwa? Ingabe uzimisele ukufa uzisola ngaleyo ndlela?
Okwedlule：Inhloso Yokwengamela Umuntu
Okulandelayo：Ubunjalo Bomuntu Bemvelo Nokufaneleka Kwakhe: Kunjani ngempela?